Darrell Long - Wikipedia
Anarana Darrell Long
Teraka 5 Aogositra 1962
Darrell Long dia injeniera amin'ny solosaina, teraka tamin'ny 5 Aogositra 1962. Mpampianatra manam-pahaizana malaza izy ary talen'ny sampana fikarohana momba ny firaketana an-tserasera. Ny tombotsoan'ny fikarohana ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fitahirizana dia ahitana rafitra fitehirizana avo lenta, rafi-pitahiram-pivoarana ary rafitra fananganana angovo azo antoka. Ny fikarohana nataony dia ahitana ny fahombiazan'ny solosaina, ny fianarana milina fampiasa, ary ny fiarovana cyber.
Ny tombotsoan'i Long dia ny fikarakarana angona angona, ny rafitra miasa, ny fizarana fizarana, ary ny fiarovana amin'ny ordinatera. Nanoratra karazana fikarohana nalaza izy tamin'ny caching web, nizarazara ny rafitra an-tsoratra, fitantanana an-tsarimihetsika matihanina amin'ny alàlan'ny finday, ary ny teknolojia marefo amin'ny bandwidth ho an'ny horonan-tsary amin'ny fangatahana, ankoatra lohahevitra hafa.
Izy no filoha lefitry ny Lefitry ny Lefitry ny Anjerimanontolon'ny Kolejy momba ny Fikarohana. Nanompo tao amin'ny Filan-kevitry ny Filoham-pirenen'ny Anjerimanontolon'i Kalifornia momba ny Laboratoire Nasionaly, ary ny Siansa & Teknolojia, Komity Nasionaly sy ny Intelligence Nasionaly ho an'ireo laboratoara. Nandritra ny taona maromaro tao amin'ny Kaomity Nasionaly misahana ny Fikarohana momba ny Teknolojia momba ny teknôlôjia, dia nodinihina sy navoaka (TIGER) ary tao amin'ny Kaomisiona momba ny fandrindrana teknolojia momba ny fiarovana sy ny hevitra. Nanompo tao amin'ny Komity mpikaroka momba ny Siansa sy Teknolojia ho an'ny fiarovana ny fiarovana. Izy dia mpikambana ao amin'ny vondrona Assessment Group (ALAG) an'ny tafika amerikana ary ny tontolon'ny masoivoho Amerikana momba ny tontolon'ny teknolojia. Mpikambana ao amin'ny Vondrona Siansa momba ny Siansa momba ny Siansa sy ny Teknolojia (ISTEG) izy ho an'ny Akademia Nasionaly momba ny Siansa, ny Injeniera ary ny Fitsaboana. Mpikambana ao amin'ny JASON izy ary manambatra ireo mpahay siansa fanta-daza ho mpanolo-tsaina ho an'ny Departemantan'ny Fiarovana Amerikana, sy ireo sampana hafa ao amin'ny sampana mpanatanteraka.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Darrell_Long&oldid=877644"
Teraka tamin'ny taona 1962
Voaova farany tamin'ny 7 Oktobra 2018 amin'ny 05:37 ity pejy ity.